धादिङको नीलकण्ठमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुदा ५ यात्रु घाइते - Janta Nepal
धादिङको नीलकण्ठमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुदा ५ यात्रु घाइते
September 29, 2019049
धादिङ । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–१३ मा यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा परेको छ । नेत्रावती गाउँपालिकाको सेमजोङबाट धादिङबेसीतर्फ आउँदै गरेको बा ४ ख ५७९३ नम्बरको बस नीलकण्ठ नगरपालिकाको कैरौंजा गाउँमा दुर्घटना परेको हो ।
७ जना यात्रु रहेको बस पल्टिर धान खेतमा खसेको जनाइएको छ । बस दुर्घटनामा ५ जना यात्रु घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार सहचालकले चलाएका कारण बस दुर्घटना परेको हो । घाइते हुनेहरुमा नेत्रावती गाउँपालिका–५ का चन्डे दमाई, सन्तमाया गुरुङ, दलबहादुर तामाङ, हस्तकुमारी तामाङ र लक्ष्मी गुरुङ छन् ।
घाइतेहरुको धादिङबेसीस्थित अस्पतालमा उपचार पछि थप उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
खोला तर्नेक्रममा बाढीले बगाउँदा एक जनाको मृत्यु
क्रीडामा मग्न एक जोडी घरको तेस्रो तल्लाबाट झरेर मृत्यु
Hey Buddy!, I found this information for you: "धादिङको नीलकण्ठमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुदा ५ यात्रु घाइते". Here is the website link: http://janatanepal.com/bus/. Thank you.